Abiy Ahmed: Protesting Ethiopian soldiers wanted to kill me – Kichuu
HomeAmharicAbiy Ahmed: Protesting Ethiopian soldiers wanted to kill me
Akkatti dhimmi kun himame kana hedduu hin jaalanne; ammoo haalli itti adeemamaa jiru ofeeggannoo guddaa gaafata. Jarri kaabatti dahatan sun amma illee adeemsicha gufachiisuuf waan hin goone hin qaban. Hidhannoo Oromoo jabeessuu, tikaa fi ittisa qulqulleessuu fi tarkaanfii dursaaf ofqopheessuun barbaachisaa dha.
Qeerroon Bilisummaa Oromoos yeroo kamiyyuu ofdaguu hin qaban; haala adeemaa jiru sirnaan jala bu’anii hordofuu qaban.
The prime minister ordered the protesting soldiers to do press-ups to defuse the tension
(bbc)—At the time, he defused the situation by ordering them to do press-ups and joining in.
Abiy’s two reactions
Elias Hordofa, BBC Afaan Oromoo
The prime minister has in the past mentioned “forces” who do not agree with t
e changes that he is making.